Version 0.3.0 – Bing (MSN) nsụgharị
July 23, 2009 site na rịọ 1 Ikwu
Anyị na-enwe obi ụtọ tinye nkwado a tọhapụ onye nke abụọ translation engine. Nke a bụ Bing (MSN) nsụgharị site na Microsoft.
Nsonaazụ ọ na-enye ndị dị nnọọ iche si na ndị ị na-si Google ntụgharị, Mgbe ụfọdụ, mma, mgbe ụfọdụ njọ.
A obere setback nke ndabara ebighị bụ na ọrụ a bụ ka beta na òkù a chọrọ, Anyị nwere obere ego anyị nwere ike ịkekọrịta ma ọ bụrụ na ị chọrọ onye, dị nnọọ ịza ajụjụ a post, akpa-abịa – akpa utom ndabere.
Ọzọkwa – anyị rụọ ọrụ Bing nsụgharị dị ka ndabere akpaka sụgharịrị ma anyị ga-amasị anụ gị echiche ahụ. Ọ bụrụ na-ezuru ndị mmadụ na-arịọ nke a mma, anyị ga-tinyekwuru mgbalị nwee nke a na-abịa tọhapụ. Ka o di ugbu – ị na-adara ka nwalee nke a mma a na saịtị, dị na-amalite ịsụgharị ma jiri Bing ekikere button.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: Bing (MSN) nsụgharị, google ntụgharị, obere, tọhapụ, WordPress ngwa mgbakwunye
Judy C na-ekwu,
November 25, 2009 na 12:19 obi